Shiinaha Glycine CAS 56-40-6 loogu talagalay soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha 'Pharma Grade' (USP / EP / BP) | Salaad
Magaca Badeecada: Glycine
CAS MAYA.: 56-40-6
Glycine (Ablyviated Gly) waa mid ka mid ah 20 amino acids. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa dawooyinka dawooyinka, quudinta iyo warshadaha wax soo saarka cuntada.
Sida cuntada lagu daro, waxaa badanaa loo isticmaalaa dhadhan, macaan iyo nafaqeyn dheeri ah. Waxaa sidoo kale lagu daraa subagga, jiiska iyo margarine si loo dheereeyo nolosha keydinta.
Sida cunnooyinka lagu daro, waxaa lagu darayaa quudinta si loo kordhiyo hamiga digaagga iyo xoolaha, gaar ahaan xayawaanka rabaayadda ah.
Maaddaama ay tahay dawo dhexdhexaad ah, Glycine waxaa loo isticmaalaa inay tahay walxo ceeriin ah oo ah 'cephalosporin', 'aureomycin buffer', VB6 iyo Threonine iwm iyo dhexdhexaadka ah 'thiamphenicol'. Marka Glycine loo isticmaalo asbiriin, waxay yareyn kartaa cuncunka caloosha. Glycine waxaa sidoo kale loo isticmaalaa xalka mudista amino acid sida faleebada nafaqada.
Glycine sidoo kale waa sheyga ceyriinka ugu weyn ee la isku daro ee geedaha loo yaqaan 'Glyphosate'.
(1) Waxaa loo isticmaalay sidii dareeraha looga saarayo CO2 warshadaha bacriminta, iyada oo lagu daro xalka galvanized.
(2) Loo adeegsaday sidii maamuliye PH ah
(3) Waxaa loo isticmaalay inuu yahay shey cayriin muhiim u ah Herbicide Glyphosate.
2. Fasalka Cuntada / Quudinta
(1) Waxaa loo adeegsaday dhadhan ahaan, macaane iyo nafaqo dheeri ah. Waxaa lagu dabaqay cabitaanka khamriga, xayawaanka iyo dhirta dhirta la warshadeeyo, oo loogu talagalay sameynta khudradda cusbada leh iyo macaanka macaan.
(2) Si loogu daro sameynta maraqa cusbada, khalka iyo casiirka khudradda, si loo wanaajiyo dhadhanka iyo dhadhanka cuntada loona kordhiyo nafaqada cuntada.
(3) Kahortag ahaan kalluunka jaakadiisa iyo saxarka looska iyo xasiliyaha kareemka, farmaajo iwm.
(4) Maaddaama ay tahay wakiil kayd ah dhadhanka milix iyo khal.
(5) Waxaa loo isticmaalay cunnooyin lagu daro si loo kordhiyo hamiga digaagga iyo xoolaha, gaar ahaan xayawaanka rabaayadda ah.
3. Fasalka Pharmac
(1) Waxaa loo adeegsaday xalka mudista amino acid sida faleebada nafaqada.
(2) Waxaa loo adeegsaday dawo dheeri ah si loogu daaweeyo myasthenia horumarka muruqyada dystrophy ee murugsan.
(3) Waxaa loo adeegsaday inuu noqdo wakiilka asiidh sameynta si loo daaweeyo neerfaha neerfaha iyo boogta caloosha kujirta.
Shayga EP7.0 BP2007 USP39
Muuqaal Budada cad ee cad Budada cad ee cad -
Muuqaalka xalka nadiif ah nadiif ah -
Imtixaanka aqoonsiga (koowaad A, labaad B, C) A Ilaa S. Ilaa S. -
B Ilaa S. Ilaa S.
C Ilaa S. Ilaa S.
Imtixaan aqoonsi - - Ilaa S.
Maaddooyinka wanaagsan ee 'Ninehydrin-positive' Ilaa S. - Ilaa S.
Baaritaan 98.5-101.0% 98.5-101.0% 98.5-101.5%
Koloriin .000.0075% .000.0075% .000.007%
Biraha culus (sida Pb) .000.001% .000.001% .000.002%
Salfateeti - - .000.0065%
Qiimaha PH 5.9 ～ 6.4 5.9 ～ 6.4 -
Khasaare ku saabsan qalajinta ≤0.5% ≤0.5% ≤0.2%
Hadhaaga dabka - - ≤0.1%
Maaddooyinka si fudud biyaha loogu kicin karo - - Ilaa S.
Hore: DL-Methionine CAS 59-51-8 ee Fasalka Pharma (USP / EP)
Xiga: L-Leucine CAS 61-90-5 ee Fasalka Pharma (USP)
73-32-5 L-Isoleucine, Fasalka Farmashiyaha L-Leucine, Fasalka L-Threonine Pharm, Nafaqada xoolaha, Fasalka Cuntada L-Threonine, L-Valine 72-18-4,